အုပ်စုအဖွင့်ပွဲမှာ သရေတစ်မှတ်နဲ့သာ ကျေနပ်ခဲ့ရတဲ့ ဘရာဇီးလ်
SUN 17 JUN 2018 WORLD CUP - GROUP E
Brazil 1 1 Switzerland
Coutinho (20' minutes) FT Zuber (50' minutes)
18 Jun 2018 . 2:59 AM
This Football update is proudly sponsored by Telenor Myanmar.
အခုနောက်ဆုံးထွက် ဘောလုံးသတင်းတွေကို Telenor Myanmar က ကူညီထောက်ပံ့ပေးထားပါတယ်။
၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလား အုပ်စုအဖွင့်ပွဲတွေမှာ နာမည်ကြီးအသင်းတွေဖြစ်တဲ့ စပိန်၊ ပေါ်တူဂီ၊ ဂျာမနီ၊ အာဂျင်တီးနားတို့ အားလုံး နိုင်ပွဲပျောက်ခဲ့သလို အခုလည်း ဗိုလ်စွဲဖို့ရေပန်းစားနေတဲ့ ဘရာဇီးလ်အသင်း ဆွစ်ဇာလန်ကို သရေသာ ကစားနိုင်ခဲ့တယ်။ အုပ်စုအဆင့်ကို လွယ်လွယ်ကူကူပဲ ကျော်ဖြတ်နိုင်မယ်လို့ ထင်ကြေးပေးခံခဲ့ရတဲ့ ဘရာဇီးလ်ဟာ ဆွစ်ဇာလန်ကို အသာစီးယူနိုင်ခြင်းမရှိဘဲ ဆွစ်ဇာလန်အသင်းရဲ့ မာမာထန်ထန် တုံ့ပြန်မှုကြောင့် ရုန်းကန်ခဲ့ရပါတယ်။ ပထမပိုင်းအစမှာ ဘရာဇီးလ်အသင်းရဲ့ ခြေစွမ်းက အားရစရာပါပဲ။ နေမာ Neymar ၊ ကော်တင်ဟို Coutinho ၊ ဂျေးဆူ Jesus ၊ ၀ီလီယံ Willian တို့ရဲ့ Individual Skills နဲ့ တွဲလုံးတွေက ဆွစ်ဇာလန်ကို ဒုက္ခပေးခဲ့တယ်။
ဒါကြောင့်ပဲ အဖွင့်ဂိုးကို ဘရာဇီးလ်အသင်း စောစာစီးစီးရခဲ့ပါတယ်။ မိနစ်(၂၀)မှာ ကော်တင်ဟိုက သူ့ရဲ့ Trademark ပုံစံဖြစ်တဲ့ ဂိုးဧရိယာထိပ်ကနေ လှပတဲ့ ဝေ့၀ိုက်ကန်ချက်နဲ့ အဖွင့်ဂိုးသွင်းယူခဲ့တာပါ။
အဖွင့်ဂိုးရခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ ဘရာဇီးလ်အသင်းရဲ့ ကစားပုံက အံ့အားသင့်စရာကောင်းလောက်အောင် ကျဆင်းသွားခဲ့တယ်။ နေမာကို ဆွစ်ဇာလန်ကွင်းလယ်လူ ဘရာမီ Behrami အကောင်းဆုံး ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာကြောင့် ပွဲချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ ဘရာဇီးလ်တိုက်စစ်က သိပ်အလုပ်မဖြစ်တော့ဘူး။ နေမာဟာ ရာနှုန်းပြည့်ကြံ့ခိုင်မှု မရှိသေးသလို၊ သူ့ကို ပြိုင်ဘက်ကစားသမားတွေက ခပ်ကြမ်းကြမ်း တားဆီးခဲ့တာကြောင့် နောက်ပိုင်း မိနစ်တွေမှာ ရုန်းကန်ခဲ့ရတယ်။ ဆွစ်ဇာလန်အသင်းရဲ့ ချေပဂိုးကတော့ ဒုတိယပိုင်းပြန်စလို့ (၅)မိနစ်လောက်အကြာမှာပဲ ထောင့်ကန်ဘောကနေ တိုက်စစ်ကစားသမား ဇူဘာ Zuber က ခေါင်းတိုက်သွင်းခဲ့တာပါ။
ဇူဘာဟာ ဘရာဇီးလ်နောက်ခံလူ မီရန်ဒါ Miranda ကို တွန်းပြီးမှ ခေါင်းတိုက်သွင်းခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဘရာဇီးလ်အသင်းအနေနဲ့ ချေပဂိုးရဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့် ဂိုးကံခေနေတဲ့အပြင် ဆွစ်ဇာလန်ဂိုးသမား ဆွန်မာ Sommer ကလည်း လက်စွမ်းပြခဲ့တာကြောင့် ပွဲဦးထွက်မှာပဲ သရေတစ်မှတ်နဲ့ ကျေနပ်ခဲ့ရတယ်။
Photo:FIFA World Cup Facebook
အခုနောကျဆုံးထှကျ ဘောလုံးသတငျးတှကေို Telenor Myanmar က ကူညီထောကျပံ့ပေးထားပါတယျ။
အုပျစုအဖှငျ့ပှဲမှာ သရတေဈမှတျနဲ့သာ ကနြေပျခဲ့ရတဲ့ ဘရာဇီးလျ
၂၀၁၈ ကမ်ဘာ့ဖလား အုပျစုအဖှငျ့ပှဲတှမှော နာမညျကွီးအသငျးတှဖွေဈတဲ့ စပိနျ၊ ပျေါတူဂီ၊ ဂြာမနီ၊ အာဂငျြတီးနားတို့ အားလုံး နိုငျပှဲပြောကျခဲ့သလို အခုလညျး ဗိုလျစှဲဖို့ရပေနျးစားနတေဲ့ ဘရာဇီးလျအသငျး ဆှဈဇာလနျကို သရသော ကစားနိုငျခဲ့တယျ။ အုပျစုအဆငျ့ကို လှယျလှယျကူကူပဲ ကြျောဖွတျနိုငျမယျလို့ ထငျကွေးပေးခံခဲ့ရတဲ့ ဘရာဇီးလျဟာ ဆှဈဇာလနျကို အသာစီးယူနိုငျခွငျးမရှိဘဲ ဆှဈဇာလနျအသငျးရဲ့ မာမာထနျထနျ တုံ့ပွနျမှုကွောငျ့ ရုနျးကနျခဲ့ရပါတယျ။ ပထမပိုငျးအစမှာ ဘရာဇီးလျအသငျးရဲ့ ခွစှေမျးက အားရစရာပါပဲ။ နမော Neymar ၊ ကျောတငျဟို Coutinho ၊ ဂြေးဆူ Jesus ၊ ဝီလီယံ Willian တို့ရဲ့ Individual Skills နဲ့ တှဲလုံးတှကေ ဆှဈဇာလနျကို ဒုက်ခပေးခဲ့တယျ။
ဒါကွောငျ့ပဲ အဖှငျ့ဂိုးကို ဘရာဇီးလျအသငျး စောစာစီးစီးရခဲ့ပါတယျ။ မိနဈ(၂၀)မှာ ကျောတငျဟိုက သူ့ရဲ့ Trademark ပုံစံဖွဈတဲ့ ဂိုးဧရိယာထိပျကနေ လှပတဲ့ ဝဝေို့ကျကနျခကျြနဲ့ အဖှငျ့ဂိုးသှငျးယူခဲ့တာပါ။
အဖှငျ့ဂိုးရခဲ့ပွီးနောကျပိုငျးမှာတော့ ဘရာဇီးလျအသငျးရဲ့ ကစားပုံက အံ့အားသငျ့စရာကောငျးလောကျအောငျ ကဆြငျးသှားခဲ့တယျ။ နမောကို ဆှဈဇာလနျကှငျးလယျလူ ဘရာမီ Behrami အကောငျးဆုံး ထိနျးခြုပျနိုငျခဲ့တာကွောငျ့ ပှဲခြိနျကွာလာတာနဲ့အမြှ ဘရာဇီးလျတိုကျစဈက သိပျအလုပျမဖွဈတော့ဘူး။ နမောဟာ ရာနှုနျးပွညျ့ကွံ့ခိုငျမှု မရှိသေးသလို၊ သူ့ကို ပွိုငျဘကျကစားသမားတှကေ ခပျကွမျးကွမျး တားဆီးခဲ့တာကွောငျ့ နောကျပိုငျး မိနဈတှမှော ရုနျးကနျခဲ့ရတယျ။ ဆှဈဇာလနျအသငျးရဲ့ ခပြေဂိုးကတော့ ဒုတိယပိုငျးပွနျစလို့ (၅)မိနဈလောကျအကွာမှာပဲ ထောငျ့ကနျဘောကနေ တိုကျစဈကစားသမား ဇူဘာ Zuber က ခေါငျးတိုကျသှငျးခဲ့တာပါ။
ဇူဘာဟာ ဘရာဇီးလျနောကျခံလူ မီရနျဒါ Miranda ကို တှနျးပွီးမှ ခေါငျးတိုကျသှငျးခဲ့တာလညျးဖွဈပါတယျ။ ဘရာဇီးလျအသငျးအနနေဲ့ ခပြေဂိုးရဖို့ ကွိုးစားခဲ့ပမေယျ့ ဂိုးကံခနေတေဲ့အပွငျ ဆှဈဇာလနျဂိုးသမား ဆှနျမာ Sommer ကလညျး လကျစှမျးပွခဲ့တာကွောငျ့ ပှဲဦးထှကျမှာပဲ သရတေဈမှတျနဲ့ ကနြေပျခဲ့ရတယျ။
by Ko Kyue .3hours ago